Isistimu yomaka wentengo ye-ESL Usayizi: 2.9”
Ngoba wethu Inani eliphakeme kakhulu lama-ESLyehluke kakhulu emikhiqizweni yabanye, asishiyi yonke imininingwane yomkhiqizo kuwebhusayithi yethu ukuze sigweme ukukopishwa. Sicela uthinte abasebenzi bethu bokuthengisa futhi bazokuthumela imininingwane enemininingwane.
Isebenza kanjani ithegi ye-ESL?
A okuphelele Ithegi ye-ESL uhlelo luqukethe izingxenye ezine: i-PC yekhompyutha eyinhloko, isikrini se-EPD, Ithegi ye-ESL kanye nemishini yetheminali ephathwa ngesandla ehlakaniphile.
Ithegi ye-ESL Okokuqala, ulwazi lwempahla kusizindalwazi lubhalwe ngekhodi ikhompuyutha yokusingatha ngokusebenzisa ifayela le Ithegi ye-ESLisofthiwe yohlelo lokusebenza, bese inani nolunye ulwazi oludinga ukubuyekezwa ludluliselwa ku-exciter nge-Ethernet (noma imbobo yokuxhumana ye-serial); i-exciter ishayela i-loop antenna ukuze ilayishe Isignali yomsakazo we-RF enolwazi lwedatha yomkhiqizo ithunyelwa kuso sonke isitolo.
I Ithegi ye-ESL Uhlelo lunemisebenzi emibili yokuxhumana: iphuzu-kuya-iphuzu kanye nokuthumela kweqembu, okungukuthi: ikhompuyutha engusokhaya ingadlulisela idatha kudatha ecacisiwe. Ithegi ye-ESL, noma konke Izimpawu ze-ESL ngokushesha Thatha ukulawula. Ithegi ye-ESL aempeleni ifake ishalofu ohlelweni lwekhompyutha ngempumelelo, isusa isimo sokushintshwa kwethegi yentengo, kanye nokuzuza ukuvumelana kwentengo phakathi kwerejista yemali neshalofu.
Ngamunye Ithegi ye-ESL igcina izingcezu eziningi zolwazi mayelana nomkhiqizo ohambisanayo, futhi umdayisi angakwazi ukuhlola kalula futhi ahlole ngosizo lwemishini yokugcina ephathwayo ehlakaniphile.
Kungani Khetha ithegi yentengo ye-ESL?
1. Inani eliphakeme kakhulu lama-ESL inokwethenjelwa kakhulu
Ukulawulwa kokusebenza okuzenzakalelayo, ukuqapha okuzenzakalelayo kanye nendlela yokuxwayisa kusenesikhathi, ukusebenza okuhle kakhulu kwesibonisi sephepha le-elekthronikhi, ukudluliswa kwedatha ebethelwe, impilo yebhethri engaphezu kweminyaka emi-5
2.Inani eliphakeme kakhulu lama-ESL kulula kakhulu
Ukushintsha kwentengo ngokuchofoza okukodwa, ukuthuthukiswa kwesofthiwe yesistimu ekude, indlela ye-ESL ezenzakalelayo ejikelezayo, ukuqala kabusha okuzenzakalelayo ngemva kokuphelelwa amandla, ukufakwa okulula nokusebenza okulula
3. Inani eliphakeme kakhulu lama-ESL ukusebenza nezimo
Sekela ukuguqulwa kwezikrini eziningi, ithempulethi yentengo yangokwezifiso yomuntu siqu, hlangabezana nezimo zezilimi eziningi, ezisebenzisana nezinkundla eziningi zetheminali, izesekeli ezinothile, ukuzivumelanisa nezimo eziningi
Ngokusebenza okusebenzayo: Inani eliphakeme kakhulu lama-ESLidlala indima yokudluliswa kolwazi nenkampani yenethiwekhi esitolo, ukuxhumana nabathengi, abasizi bezitolo, kanye nekomkhulu ngezindlela eziningi ukuze kuthuthukiswe ulwazi lwabathengi, kuthuthukiswe ukugeleza komsebenzi, kanye nokubona ukusebenza okumaphakathi nokuphathwa kokulungiswa. Izitolo zingaphinda zixhumeke ku-inthanethi futhi zingaxhunyiwe ku-inthanethi nge-Inani eliphakeme kakhulu lama-ESL, okuvumela izitolo ezibonakalayo ukuthi zenze, ziqoqe, zihlaziye futhi zisebenzise idatha yokuziphatha kwabathengi, futhi zinikeze isisekelo sedatha ukuze abathengisi bathole ukumaketha okunembe kakhudlwana. Uma kuqhathaniswa nezindlela ezivamile zokumaketha ezinjengokuhlukaniswa kwe-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, izindlela ezizodwa, abathintwayo abangabodwa, okungacaci ukuthi izinsizakusebenza zikuphi, nobunzima bokulandelela umthelela wokugcina wokumaketha, ukumaketha okunembayo kungafinyelelwa kalula ngokusebenzisa ukusetshenziswa okuhlangene kwesikrini sebha yeshalofu kanyeInani eliphakeme kakhulu lama-ESL. Futhi yonke inqubo iyalandelelwa, ukulawulwa kwesikhathi sangempela, ukukhulisa umphumela wokumaketha.
Bonisa umbala Okumnyama, okumhlophe, okuphuzi
Isisindo awu 44g
Izinga lokushisa lokusebenza 0 ~ 50℃
Izinga lokushisa lesitoreji -10 ~ 60℃
Impilo yebhethri 5 iminyaka
Sibaningi Intengo ye-ESL ongakhetha kukho, kukhona okukufanelayo njalo! Manje usungakwazi ukushiya imininingwane yakho ebalulekile ngebhokisi lengxoxo elisekhoneni elingezansi kwesokudla, futhi sizokuthinta phakathi namahora angu-24.
I-FAQ yesistimu yethegi ye-ESL
1.Ngaphezu kwethegi yentengo ye-ESL engu-2.9 intshi, unabo abanye osayizi bentengo ye-ESL?
Njengomphakeli womkhiqizi wamathegi entengo ye-ESL, sizama okusemandleni ethu ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende amaningi futhi sinikeze amathegi entengo e-ESL osayizi abahlukahlukene, ukusuka ku-1.54 intshi ukuya ku-11.6 intshi noma ngisho nangaphezulu.
2.Singakwazi yini ukuthenga ibhethri elisetshenziswe kuthegi yentengo ye-ESL esitolo esikhulu? Noma ibhethri elikhethekile?
Amabhethri e-Cr2450 athengiswa ezitolo ezinkulu ezivamile, futhi uma esetshenziswa ngokuvamile, amabhethri kuthegi yethu yentengo ye-ESL angasetshenziswa iminyaka embalwa noma ngaphezulu.
3.Ngingumnikazi wesuphamakethe encane. Yini okudingeka ngiyithenge ukuze ngisebenzise uhlelo lwakho lomaka we-e inki?
Engxenyeni yezingxenyekazi zekhompuyutha, amathegi entengo kayinki anosayizi abahlukene akhethwa ngokuya ngempahla ehlukene. Enqubweni yokufaka, izinsiza ezihlukahlukene ziyadingeka ukuze ufake ithegi yentengo ka-e, bese kudingeka isizindalwazi ukuze kudluliselwe idatha. I-PDA iyadingeka ukuze ufake impahla.
Engxenyeni yesofthiwe, sinesofthiwe eku-inthanethi nesofthiwe yesitolo esisodwa ongakhetha kuyo.
Isinyathelo esilandelayo ukufakwa kwethegi yentengo ye-E Ink kanye nokumiswa kwesoftware. Sinemiyalo enemininingwane futhi onjiniyela bazokuqondisa ukuze ufake futhi uxhume isofthiwe.
4. Hlobo luni losizo ozoluhlinzeka ngokuhlanganisa ithegi yentengo kayinki ohlelweni lwethu lwe-POS?
Pi-rotocol / API / SDK kuyinto okudingekayo ku xhuma i I-ESL intengo umaka ku lakho Isistimu ye-POS, sizokwenza kanjalo hlinzeka lezi futhi siza unjiniyela wakho nganoma isiphi isikhathi ngesikhathi sokuhlanganisa, uma ufuna ukuthi sisize ubuso nobuso, singathanda ukwenza futhi.
5. Ingabe uzohlinzeka ngesampula YAMAHHALA ukuze ihlolwe?
It kuncike, sinezimo eziningana ezihlukene zokuhlinzeka ngamasampula wamahhala, sicela usithinte ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
6. Nginezitolo ezingama-40. Ngingakwazi ukusebenzisa isofthiwe efanayo ukuphatha lezi zimpahlaphakathi izitolo zami?
Yiqiniso, lokhu kungomunye wemisebenzi yemikhiqizo yethu. Isofthiwe yethu eku-inthanethi izohlanganisa izitolo zakho ezingu-40 ndawonye, ​​futhi ungakwazi
phatha lezi zitolo ngokwehlukana. Isofthiwe inemisebenzi eminingi. Sihlanganise imisebenzi eminingi njengoba ungase uyidinge kusofthiwe. Ngikholelwa ukuthi ngemva kokusebenzisa ithegi yethu yentengo ye-ESL, Ukuphatha kwakho lezi zitolo kuzoba lula kakhulu futhi kusheshe.
7. Angakwazi uphrinta noma unamathisele ilebula Yelogo yethu kumathegi amanani e-ESL?
Yebo, isevisi inikezwa.
Ividiyo ye-MRB ESL ye-HL290
Okwedlule: I-MRB yentengo ye-electronic tag HL213F yokudla okuqandisiwe
Olandelayo: Intengo ye-MRB e HL420
I-E Ink Price Tag
umaka weshalofu we-electronic
I-Esl Price Tag
Abakhiqizi bethegi bentengo ye-ESL
Abahlinzeki bethegi yentengo ye-ESL
Uhlelo lwethegi yentengo ye-ESL
Isistimu yethegi ye-ESL
Isistimu yelebula yeshalofu ye-MRB HL213
Intengo ye-MRB e HL420